Cali Axmed – GEELLE MAG
Cali Axmed Posted On November 4, 2019
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay ayaa waxa ay sheegayaan in roob daadad wata uu saacadihii la soo dhaafay ka da’ay Magaaladaasi, waxaana ku dhintay Cunug Yar oo ka mid ahaa dadka Magaalada Baydhabo. Dhimashada Cunuga […]
Qaramada Midoobay ayaa ku biirtay dadaalada sida deg degga ah gargaarka loogu fidinayo dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay fatahaadda Webiga Shabeelle. Barnaamijka Cuntada Adduunka ee (WFP), waaxda gargaarka ee Qaramada Midoobay, iyo la-hawlgalayaal kale oo ay fududeeyeen Xafiiska Isku-duwidda Arrimaha […]
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dalka oo dhan Maamulkiisa ay leedahay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, isla markaana maamulada dalalka qaarkood ay si qaldan u fahmeen nidaamka federaalka. Isaga […]
Sheekh Shaakir oo beeniyay in Ciidamada Dowladda ay Ahlusunna kala wareegen deegaano badan
Madaxa Xukuumadda Dowlad Goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee Galmudug iyo mad madowga soo kala dhex-galay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Hoggaanka Ahlusunna. Wareysi uu siiyay laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da ayuu ku […]
Dowladda Federaalka oo xil cusub u Magacowday Wiil uu dhalay Eng. Yariisow
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka ah ee Soomalaiya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu xil cusub u Magacaabay wiil uu dhalay Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ahaana Duqii Magaalada Caasimadda ah ee Muqdishgo Allah ha u naxriistee Cabdiraxmaan […]
Wasiir Maareeye oo beeniyay hadal kasoo baxay dowladda Kenya
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) oo la hadlay laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa beeniyay in Dowlada Soomaaliya ay ogeyd in wafdigii Kenya ee ka qeyb-galay caleemo-saarkii Madaxweynaha Maamulka Jubbaland ee Axmed […]
Sawiro / Wararka
Sawiro:-Wafdi ka socda Howlgalka Mareykanka ee Afrika oo gaaray Magaalada Kismaayo
Waxaa Maanta Magaalada Kismaayo ee Xarunta Kumeel gaarka ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland gaaray Dhakhaatiir ka socota howlgalka Mareykanka ee Afrika ee loo soo AFRICOM, iyada oo halkaasina lagu soo dhaweeyay. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Mursal Maxamed […]
Madaxweyne Kenyatta oo shaaciyay Natiijadii tirakoobkii laga sameeyay dalka Kenya
Uhuru Kenyatta Madaxweynaha dalka Kenya ayaa Maanta oo Isniin ah waxa uu ku dhawaaqay natiijadii kasoo baxday tirakoobkii dhawaan laga sameeyey dalkaasi. Madaxweyne Kenyata ayaa sheegay in tirada Guud ee dadka ku nool dalka Kenya ay gaarayaan 47.6 milyan, halka […]
Maxaa looga Arrinsaday Kulankii Maanta ee Golaha Aqalka Sare?
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Maanta ku yeeshay Xarunta Golaha Aqalka Sare ee Magaalada Muqdisho Kulankii 10-aad ee Kalfadhiga 6-aad, iyada oo uu shir Guddoomiyay Guddomiyaha Golaha Aqalka Sare Senatar Cabdi Xaaahi Cabdullahi. Ajanadaha Kulanka […]
Dowladaha Soomaaliya iyo Uganda oo heshiis kala saxiixday
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Maxamed (Amar-dambe) iyo Wasiiru Dowlaha difaaca dalka Uganda Charles Okello Engola ayaa todobaadkaan yeeshay kulan ay uga wada hadleen xoojinta xiriirka difaaca ee labada dal. Shabakada Wararka ee dalka […]